Anti Bird Net, ọdọ mmiri Netting, Garden Netting ntupu - Aturu Atọ
Kpachara anya n’ubi gị - echela maka ụmụ ahụhụ, mgbada na nnụnụ ga-ezu ohi n’ogige gị. Chedo okooko osisi gị, mkpụrụ osisi gị, mkpụrụ osisi na veggies ma chefuo banyere ndị na-eme ihe ọjọọ ruo mgbe ebighị ebi. Mfe iji wụnye, bara uru ma nwee nchebe, ụgbụ na-adịgide adịgide nke na-adịgide ruo ọtụtụ afọ. Ihe nkwado nnụnụ na-enyere ìhè na mmiri aka iru mkpụrụ osisi na ihe ọkụkụ. 100% Ọhụrụ dị elu ma dị elu. Ihe: Pee ntupu Size: 10mm x 10mm, 12mm x 12mm, 15mm x 15mm, 20mm x 20mm, 25mm x 25mm, 40mm x 40mm Agba: Green, Black ...
Knitted mgbochi nnụnụ ụgbụ sitere na HDPE monofilament ma nye nchedo ogologo oge maka ụdị ihe ọkụkụ niile na osisi megide nnụnụ niile na anụ ọhịa. Otutu obosara di na 20m maka ebe buru ibu. Ogologo ndụ nke ụgbụ ahụ bụ afọ 4-6, dabere na ọnọdụ ojiji. Enwere ike iji ngwaahịa a yana ngịga mkpụrụ osisi, iji kpuchie elu ụlọ yana enwere ike iji kpuchie ọdọ mmiri iji chebe azụ site na mwakpo heron ebe ọ na-ewepụ akwụkwọ. Ihe: Pee ntupu Size: ...
Ezubere ihe nchekwa ihe ubi iji kpuchido ogige gị na nhazi ala site na nnụnnụ, anụmanụ na ndị ọzọ na-eme ihe ọjọọ. Dị na ọtụtụ nha. Mkpụrụ mkpụrụ mkpuchi Mesh Item Number Size ntupu Size TGS-SL-110 1x8m 10X10mm TGS-SL-210 2x4m 10X10mm TGS-SL-21619 2x16m 19x19mm TGS-SL-23219 2x32m 19x19mm TGS-SL-210019 2 × 100 19x19mm TGS-SL- 215019 2 × 150 19x19mm Ogige netting Nkebi Number Size ntupu Size TGS-SL-7100 7′x100 ′ 1/4 ″ 1/2 ...
A na-ekpochapu ahịhịa polyethylene, netwọkụ pean, bean, peas ụtọ na osisi ndị ọzọ na-arị elu - yana agwa ndị na-agba ọsọ na-erite uru site na netwets mgbe a na-atụkwasị n'elu osisi. Ejiri Pee, ntaneti nwere ike dochie anya ntaneti igwe, ihe igwe na ihe na-emebi emebi. Ọ na-adịgide adịgide, ọkụ ma sie ike ma enwere ike iji ya site n'otu oge gaa na nke ọzọ, dị mfe ịwụnye ma na-eguzogide ọgwụ ndị mpụga. Ụgbụ a na-enyere aka ịkwalite osisi ịrị ọhụrụ na ...
Plastic Garden Trellis Mesh bụ ihe amịpụtara HDPE UV na-eme ka oghere nke Trellis dị mma maka ịkwado osisi ịrị elu, ma ọ bụ nchekwa ogige. Ọ bụ a fechaa ọzọ ka osisi ma ọ bụ waya trellis na UV-echebe otú ọ ga-adịgide. I nwekwara ike iji ntupu trellis a dị ka ụzọ iji mepụta nkịta nkịta ma ọ bụ nsu ọkụkọ. ma ọ bụ bụrụ ogige okporo ụzọ maka ụmụaka. Ma tinye ya iji mee ka ụmụaka pụọ ​​n'ọdọ mmiri gị na ebe ndị ọzọ na-adịghị mma nke yad gị. Anyị plastic ntupu fencing dị na oghere nha ...
Gutter nche ntupu, plastic gutter nche ntupu gita ekpuchi mesh gutter nche mpịakọta na nko maka mmiri ozuzo epupụta, Jiri maka Ngwaọrụ & Home Mmelite - A na-ejikarị ya na ngwaahịa mmiri, anụ ọkụkọ ozuzu, ọrụ okike, iwu obodo, mmezi ngwaahịa mmiri, golf golf N'ezie nchebe. Gọta Nche ntupu Cover Ihe: eyi / Pee Agba: Black Size: 16 ft x 6in, 20 ft x 6in, 20ft x 7.1in, 2mm ọkpụrụkpụ Durable, Mgbanwe ntupu nwere ike ịbụ mfe wepu & Cut to Long with Sci ...
Butterfly netting ntupu mere site na HDPE siri ike na UV kwụsiri ike, ọ na-adị ka akwa dị nro imetụ aka ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ. Ìhè iji dina ozugbo n'ihe ọkụkụ ma sie ike iji kpuchie okpokolo agba, cages ma ọ bụ hoops. Arụ ọrụ dị ka a nkịtị mgbochi n'etiti kụrụ & urukurubụba-egbochi ha fromtọ àkwá ha na n'aka, caterpillars na-eri ihe ubi. O bakwara uru n’ichebe ọdọ mmiri ka ụmụ irighiri ihe na Heron daa. Ntupu size 6mmx6mm ngwugwu: Baled ma ọ bụ na-apụta na Pee akpa ...
Emere akwa a kpara nke ọma ka anyị wee kwe ka ikuku ikuku na-ajụ gị oyi ma na-abịa n'ọtụtụ ihe mkpuchi, yabụ ị nwere ike ịchọta nke ga-egbo mkpa gị. A na-ejikarị Ejiji Ejiri Ejiji mee ihe na ngwa metụtara nchebe ihe ọkụkụ na ọrụ ugbo. 35% -100% ndo dị dị na agba dị ka ọcha, nwa, aja aja, odo, ọbara ọbara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Mere si UV guzosie ike HDPE Ike, inogide na-eguzogide ọgwụ tearing na rotting Dị na 1m- 12m widths, ogologo dị ka arịrịọ Mezie + Ta ...
Ihuenyo Nzuzo nzuzo nke ejiri ihe eji eme HDPE, a na-emecha akụkụ anọ site na ngwongwo mesikwuru ma mechaa ya na grommets n'akụkụ anọ niile, wee tinye ya ma ziga ya maka nrụnye. A na-eme ka akwa ahụ sie ike nke ọma ka o wee nwee ike iguzogide ịla n'iyi ma jigide ike ihe maka afọ eji. Enwere ike idozi ya na zip zip maka ntinye. A na-ejikarị yad, ogige ntụrụndụ, ebe ọdọ mmiri na-ejigide, ụlọ ikpe, ihe omume, mbara ihu na ubi. Ihuenyo nge ahụ na-eme ka ikuku na mmiri gafere, jide ...
Emebere Anti-Hail Net maka ikpuchi osisi apụl, ubi mkpụrụ osisi, ubi vaịn na griin haus. A akwa njupụta polyethylene, super kwụsiri ike megide UV ụzarị, iji gbochie akụ mmiri mmiri mebiri na a osisi iche iche nke kụrụ. Na-enye aka ichebe osisi na mkpụrụ osisi n'aka nnụnụ ma ka na-ekwe ka ọtụtụ anwụ gafee. Etsgbụ mgbochi akụ mmiri igwe dị arọ, na-agbanwe agbanwe, dịkwa mfe ịwụnye na iwepụ. Ihe: Pee Agba: White, Piel Weight: 45gsm, 60gsm, 70gsm, 90gsm ngwugwu: Baled / apụta → Ike, dọkatụrụ adọka ...
HDPE Olive Net maka Owuwe Ihe Ubi Olive bụ nke eji ihe ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe ma na-adịgide adịgide UV guzobere polyethylene. Gbụ ahụ nwere ọtụtụ ụdị ntan iji bulie ụzọ owuwe ihe ubi dị iche iche nke oliv na mkpụrụ osisi. Enwekwara ike iji ya iji kpokọta ọtụtụ mkpụrụ osisi dị ka walnuts, oliv, hazelnuts na chestnuts ect. Oge magburu onwe ya iji zere ọnwụ nke ngbanwe oge niile ... Site na ntughari na perforation, enwere ike ịdakwasị ala ma ọ bụ kwụgidere ya)
Ọhụrụ webụsaịtị www.3sheepgarden.com
Ezigbo Ahịa, Anyị agwụla anyị website mmelite. Mmadụ Bịa na izipu ase ka anyị. Anyị nọ ebe a n’oge ọ bụla. Ekele & Nke kacha mma 3sheepgarden ngwaahịa